Soo iibso budada pyridoxal hydrochloride (65-22-5) hplc = 98% | AASraw
/ Products / R & D Reagents / Pyridoxal hydrochloride budada
SKU: 65-22-5. Category: R & D Reagents
AASraw waxaa la socda awoodda wax soo saarka iyo wax soo saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga budada Pyridoxal hydrochloride (65-22-5), iyada oo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Pyridoxine HCl budada waa cusbada hydrochloride ee Vitamin B6. Marka lagu dabaqo jirka, Pyridoxine wuxuu caawiyaa isku dheellitirka sodium iyo potassium iyo sidoo kale horumarinta unugyada dhiigga cas. Waxaa sidoo kale loo maleynayaa in uu yahay ka hortag ah ciriiriga, cambaarta, iyo cudurka psoriasis, sida laga soo xigtay Wikipedia.
Fiidiyowga Pyridoxal hydrochloride
Pyridoxal hydrochloride Calaamadaha aasaasiga ah
Formula kelli: C8H10ClNO3
Miisaankani waa: 203.62
Dhibcaha Biyaha: 159 ilaa 162 ° C
Color: Caddaan cad ama midab cad Crystalline
Dheecaan budada pyridoxal hydrochloride
MAGACA GUUD (S): Hydroloral HCL
Isticmaalka Hydrochloride Pyridoxal
Haddii aanad qaadan dawo ka dhasha fitamiin B6 oo aan ka dhicin vitamin B kale (sida penicillamine ama Isoniazid), waa inaad qaadataa "buuxa B". Taasina waa sababta oo ah fitamiin B si wada jir ah. Waa kuwan tusaalayaal:
Jirkaagu wuxuu magdhow siin karaa niacin yaraanta leh pyridoxine.
Qawaaniinka Homocysteine, oo ah walax guban oo la xidhiidha cudurka wadnaha iyo Alzheimers, waxay ku xiran tahay ugu yaraan pyridoxine (B6), niacin (B3), iyo cobalamine (B12).
Dadka leh heerarka hoose ee B6 waxay halis ugu jiraan cudurka wadnaha, laakiin xaddiga cudurrada lafdhabarka ah hoos uma dhicin ilaa ay helaan B6 iyo folic acid labadaba.
Waa maxay qiyaasta Pyridoxal hydrochloride
Ugu yaraan B6 loo baahan yahay si looga fogaado yaraanta waa qiyaastii millatariga 1.7 maalintii oo hore loo sii daayey. Waxaad ka heli kartaa seddex jeer oo ah khudradda la isku daray iyo / ama rootiga cad.
Si kastaba ha noqotee, si aad u hesho fitamiin B6 badan oo ka baxsan cuntada aan xoogga lahayn, waxaad u baahan tahay inaad cunto:
10 oz (gram 280) oo ah digaag khafiif ah (karsan), ama
11 oz (gram 308) ee salmon karsan, ama
4 muuska, ama
2-1 / 2 dubay baradho, maqaar, ama
1 pound of isbinaajka cayriin
Sababtoo ah dadka intooda badani waxay cunaan badar firirsan oo roodhida leh iyo rooti, ​​Fitamiin B6 waa yaraanta-waa wax aan dhicin - haddii aadan sameynin wax sax ah adigoo cunaya dhammaan dabiiciga!
Sidee buu shaqeeyaa Pyridoxal hydrochloride
Pyridoxine HCl waa cusbada hydrochloride ee Vitamin B6. Marka lagu dabaqo jirka, Pyridoxine wuxuu caawiyaa isku dheellitiridda sodium iyo potassium iyo sidoo kale horumarinta unugyada dhiigga cas. Waxaa sidoo kale loo maleynayaa in uu yahay ka hortag ah xannibaadda, cambaarta, iyo cudurka psoriasis, sida laga soo xigtay Wikipedia. Waxaa sidoo kale loo maleynayaa in uu leeyahay antibiyootiko iyo antioxidant marka la eego maqaarka, inkastoo ay jirto baaritaan aad u yar oo lagu xaqiijinayo sheegashooyinkan (CosmeticsCop.com). Inkasta oo Vitamin B6 lafteeda aysan si toos ah u jecelnin daryeelka maqaarka marka loo eego sida ugu macquulsan, yaraanta waxay keeni kartaa dhibaatooyinka maqaarka, oo ay ku jiraan dermatitis-ka, cuncunka, cambaarta, iyo fayadhowrka (iHealthDirectory.com).
Faytamiin B6 ayaa si dabiici ah looga heli karaa badarka miraha, digirta, khudradda, waxyaabaha maalinlaha ah, ukunta, kalluunka, hilibka iyo burka, laakiin Pyridoxine waxaa si dabiici ah looga helaa miraha yar yar, oo ay ku jiraan miro masduulay oo ka timid South East Asia. Pyridoxine waxaa loo isticmaalaa sidii maqaarka iyo timaha xajmiga, waxaana laga helaa noocyo kala duwan, oo ay ku jiraan alaabta qubeyska, saabuunta iyo saableyda, nadiifinta alaabooyinka, alaabta daryeelka timaha, iyo maqaarka daryeelka maqaarka.
Faa'iidooyinka Pyridoxal hydrochloride
Sida aad ka heli karto meelo kale oo ku yaal boggan, suurtogalnimada B6 waxay ku caawin kartaa finanka / rosacea, autism, dhibka fekerka maqan iyo feejignaanta maqnaashaha-xinjirnimada (ADHD), rheumatoid arthritis, xasaasiyad, niyadjab, niyadjab weyn, homocysteine, cudurada wadnaha, heerarka lipid , niyad-jabka, maskaxda oo la xiriirta uur-qabasho, niyad-jab oo la xidhiidha isticmaalka kiniinka ka hortagga afka, cilladda hor-joogta ah iyo xanuunka dysphoric-ka, calaamadaha menopause, hoos u dhaca garaadka iyo xusuusta oo aan sababin Alzheimers, muruqyada murqaha, infakshanka kaadiheysta, cadaadiska dhiigga sareeya, cadaadiska dhiigga, cirridka sonkorowga, neefta, cillad maskaxeed, cillado murqaha ah (boogo xuubka), noocyo badan oo iskudhexyaaca ah, vertigo, iyo miisaan.
Suuq-galka Pyridoxal hydrochloride
Dib u eegista Pyridoxal hydrochloride
Waa maxay hydrochloride hydrochloride? Pyridoxine waa qaabka fitamiin B6 oo ay sameeyaan dhirta, gaar ahaan jeermiska sarreenka, bariiska, iyo hadhuudhka. Pyridoxine hydrochloride, oo sidoo kale loo yaqaanno pyridoxine HCl, waa qalalan, oo caddaan ah oo loo isticmaali karo in lagu dhajiyo fitamiin B oo muddo dheer gaaraya inta aad ku kaydsanaysid shelf.
Ku dhowaad qof kastaa wuxuu helaa B6 ku filan si uu u ilaaliyo astaamaha naaquska ah sida dibnaha daboolan, indhaha oo barara, iyo hurdo la'aan, laakiin qof kastaa ma helo fitamiin B6 ku filan oo ka soo kabashada cudurka. Halkan waxaa ah saddex waxyaabood oo qof walba u baahan yahay inuu ka ogaado pyridoxine hydrochloride isticmaalka dheeraadka ah si loola dagaallamo cudurka loona ilaaliyo caafimaad leh.
Sidee loo iibsadaa Pyridoxal hydrochloride from AASraw
Pyridoxal hydrochloride Cunnooyin